Minista njem nlegharị anya nke Jamaica: A chọrọ mmeghachi omume njem nlegharị anya zuru ụwa ọnụ ugbu a
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Jamaica » Minista njem nlegharị anya nke Jamaica: A chọrọ mmeghachi omume njem nlegharị anya zuru ụwa ọnụ ugbu a
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Caribbean • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ gbasara Jamaica • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • nzukọ • News • Akụkọ na -agbasa ozi na Portugal • Ịrụ ọrụ • Sustainability News • Tourism • Okwu Nlegharị Anya
Minista njem nlegharị anya nke Jamaica, Hon. Edmund Bartlett, na Mahadum Evora na Portugal
Minista njem nlegharị anya nke Jamaica, Hon. Edmund Bartlett, kwuru na oria ojoo COVID-19 emeela ka ọ pụta ìhè na ọ dị mkpa maka ndị na-eme atụmatụ njem nlegharị anya ụwa na ndị isi ụlọ ọrụ iji mee ka ụzọ mkpali na mkpebi siri ike, kwalite nkwụsi ike nke ngalaba ahụ.
Ihe a na -atụ anya nke ukwuu “World for Travel - Forum ,vora,” ihe omume ụlọ ọrụ na -adigide njem zuru ụwa ọnụ, malitere taa na Évora, Portugal.
Mkparịta ụka panel lekwasịrị anya n'isiokwu bụ "COVID-19: Ngalaba na-eguzogide na-ebuga na nkwekọrịta ọhụrụ na ọchịchọ ndị ndu ọhụrụ."
Minista Bartlett mere ka ọ pụta ìhè na ọrịa ọjọọ a egosipụtala mkpa ọ dị iguzobe otu ọrụ ma ọ bụ kọmitii ime ihe ga -arụ ọrụ ozugbo na nsogbu.
“N'ozuzu, ọrịa ọjọọ ahụ echetara ndị na -eme iwu njem na ndị isi ụlọ ọrụ na ha bụkwa ndị njikwa nsogbu. Nke a chọrọ ọnọdụ ga -aghọta ma nabata ịdị nso nke ihe iyi egwu dị iche iche na mpaghara ahụ yana ihe ga -esi na ya pụta kwesịrị ịgbalite usoro iji kwalite njikere ya iji merie ihe ịma aka nke ugbu a na ọdịnihu, "Bartlett kwuru.
Ọ tụrụ aro na mkpakọrịta na mmekorita bara uru kwesịrị ka ekwusi ọchịchị a ike; amụma na-achịkwa data; echiche ọhụrụ na mmegharị ya na iwulite ikike mmadụ. Echiche ndị ọzọ nwere ike ịgụnye ịkpa oke ike na icheiche ngwaahịa; iguzobe sistemụ ozi dị irè, ezigbo oge; na nkwa maka mmepe njem nlegharị anya nke na-eme ka ọdịmma dị iche iche na echiche ọdịnihu bụrụ ma akụ na ụba, mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ọdịbendị na n'ezie, gburugburu ebe obibi.
Onye ozi ahụ kwuru okwu ndị a n'oge mkparịta ụka nke a na -atụ anya nke ukwuu “Ụwa maka njem - Évora Forum,” mmemme ụlọ ọrụ njem na -adigide zuru ụwa ọnụ, nke malitere taa na Évora, Portugal.
Mkparịta ụka ahụ lekwasịrị anya n'isiokwu bụ "COVID-19: Ngalaba na-agbanwe agbanwe na-achọ ihe ọhụrụ na ọchịchọ ndị ndu ọhụrụ," Peter Greenberg, onye na-ahụ maka njem na CBS News na-ahazi ya. Nnọkọ ahụ nyochara ka gọọmentị na ụlọ ọrụ na -esi ebido idu ndú n'otu ụzọ na -enye ohere ka ngalaba ahụ metụta amụma.
Onye ozi ahụ sonyeere Mazị Jean-Baptiste Lemoyne, odeakwụkwọ nke State for Tourism, France; Onye isi obodo ya bụ Fernando Valdès Verelst, odeakwụkwọ nke State for Tourism, Spain; na Onye isi ala Ghada Shalaby, onye osote minista na -ahụ maka njem nlegharị anya na ihe ochie, Arab Republic of Egypt.
N'oge ngosi ya Minista Bartlett gosikwara na ọrịa ọjọọ emeela ka ọ pụta ìhè na ọ dị mkpa maka mpaghara njem iji guzobe ndị ọrụ ma ọ bụ kọmitii ime ihe nwere ike rụọ ọrụ ozugbo na nsogbu.
“Akụ a dị oke mkpa na-enye uru dị mkpa na ahụmịhe njikwa nsogbu n'ihe banyere ịhụ nzaghachi ngwa ngwa, nkwukọrịta ezubere iche, itule ozi n'etiti ịdọ aka ná ntị na mmesi obi ike na imekọ ihe ọnụ na imekọ ihe ọnụ, nke na-enye ohere iji nweta ike, nka na akụrụngwa dị iche iche. nweta ihe mgbaru ọsọ nkịtị. N'ihi mmekọrịta siri ike n'etiti ndị nwere oke, ikike ịmata ihe egwu dị na mbụ yana imebe mwepụ na usoro mgbake dị mma, "Bartlett kwuru.
Ndị nhazi ahụ achọpụtala na mbipụta mbụ nke “A World for Travel - Évora Forum” ga -elekwasị anya na akụkụ dị mkpa nke ụlọ ọrụ ebe mgbanwe dị mkpa, na -achọpụta usoro ndị ọ dị mkpa ka ewere na ijikọ usoro a ga -etinye.
Hon. Okwu Edmund Bartlett n'uju:
"Nnukwu mmetụta akụ na ụba nke ụlọ ọrụ njem nlegharị anya na Caribbean na -egosi nhọpụta ya dị ka otu n'ime ụlọ ọrụ dị na mpaghara a na -ahụta ugbu a" oke oke ka ọ daa. " WTTC mere atụmatụ na "akụ na ụba ndị njem" dị ihe dị ka okpukpu 2.5 karịa mpaghara ndị njem na Caribbean. Na mkpokọta, onyinye na -apụtachaghị ìhè na ntinye nke njem maka mmepụta akụ na ụba na Caribbean ka a na -ekwu na ọ bụ okpukpu atọ nke ụwa ma dị elu karịa nke mpaghara ndị ọzọ. Ihe data a na -amata na njem nlegharị anya na -arụpụta ọtụtụ ihe site na ọtụtụ njikọ azụ azụ ya na ngalaba gụnyere ọrụ ugbo, nri, ihe ọveraụ ,ụ, ihe owuwu, ụgbọ njem, ụlọ ọrụ okike na ọrụ ndị ọzọ. Njem nlegharị anya na -enye 14.1% nke ngụkọta GDP (nke ya na ijeri US $ 58.4) yana 15.4% nke ọrụ niile. Na Jamaica aturu onyinye nke ngalaba pre-COVID 19 tụrụ na JMD 653 ijeri ma ọ bụ 28.2% nke GDP na ọrụ 365,000 ma ọ bụ 29% nke ọrụ niile.
“Maka akụ na ụba ndị Caribbean na-adabere na njem nlegharị anya, mgbake ngwa ngwa site na nsogbu njem nlegharị anya ugbu a nke oria ojoo butere bụ n'ezie na nkwụsi ike macroeconomic mpaghara. Yabụ, n'ime oge ọdịda na enweghị ntụkwasị obi dịtere aka, enwere mkpa doro anya maka ịkekọrịta oke ihe egwu na ibu ọrụ metụtara njikwa ọrịa na ọrụ nke ịchọpụta na nleba anya mbelata, nkwụsi ike na usoro mgbake, n'etiti ihe niile. Ndị ọ metụtara gụnyere ndị na -eme iwu, ndị isi ụlọ ọrụ, ndị na -elekọta ụlọ, ọdịmma njem ụgbọ mmiri, obodo, obere azụmaahịa, ndị ọrụ njem, ndị ọrụ ahụike, ndị mmanye iwu wdg. oge ọchịchịrị a, onye ndu na isi obodo enweela ọkwá dị elu.
Minista njem nlegharị anya nke Jamaica, Hon. Edmund Bartlett, (n'aka nri) na -a atta ntị nke ọma na isi ihe onye isi ya bụ Ghada Shalaby, onye osote onye nlegharị anya njem nlegharị anya na ihe ochie, Arab Republic of Egypt (na enyo) n'oge mkparịta ụka nke a na -atụ anya nke ukwuu 'A World for Travel - Forum Évora,' mmemme ụlọ ọrụ njem na -adigide zuru ụwa ọnụ, nke malitere taa na Évora, Portugal. Ịkekọrịta na oge a bụ (n'aka ekpe) Onye isi ala Fernando Valdès Verest, odeakwụkwọ nke State for Tourism, Spain na Onye Ọchịchị Jean-Baptiste Lemoyne, odeakwụkwọ nke State for Tourism, France.
“N'ọnọdụ Jamaica, n'ihi njikọta nke ime ihe ngwa ngwa, onye ndu na -eme ngagharị, nkwukọrịta dị mma na echiche ọhụrụ, anyị nwere ike mezie ngwa ngwa ma mejuputa usoro ahụike na nchekwa ọhụrụ nke duziri njikwa ngalaba nke ọrịa na -anabata nke ọma n'ụwa niile. ụkpụrụ. Anyị na-etinyekwa aka na ndị niile metụtara anyị- ụlọ ọrụ njem, ahịrị njem ụgbọ mmiri, ndị na-enye ụlọ oriri na ọ ,ụ ,ụ, ụlọ ọrụ ntinye akwụkwọ, ụlọ ọrụ na-ere ahịa, ụgbọ elu wdg WTO, CTO CHTA wdg. nọ na -eme usoro niile dị mkpa iji bụrụ ebe nchekwa na nchekwa maka ndị ọbịa niile.
“Anyị nakweere usoro ọha mmadụ niile maka mmejuputa na nleba anya nke usoro iwu dị mkpa maka njikwa ọrịa na -efe efe nke ọma. Dịka ọmụmaatụ, atụmatụ ise anyị maka mgbake nke ngalaba njem nlegharị anya nke gụnyere imepụta usoro ahụike na nchekwa siri ike, ịbawanye ọzụzụ maka akụkụ niile nke ngalaba njem, iwulite nchekwa na akụrụngwa nchekwa, na inweta PPE na akụrụngwa ịdị ọcha ka emebere ma tinye ya n'ọrụ. dabere na mmekorita nke ụlọ ọrụ ọha na eze nke nwere ndị nwere oke mkpa sitere na mpaghara ndị njem, Ministry of Tourism, na Agencies of the Ministry.
“N'ozuzu, ọrịa ọjọọ ahụ echetara ndị na -eme iwu njem na ndị isi ụlọ ọrụ na ha bụkwa ndị njikwa nsogbu. Nke a chọrọ ọnọdụ ga -aghọta ma nabata ịdị nso nke ihe iyi egwu dị iche iche na mpaghara ahụ yana ihe ga -esi na ya pụta kwesịrị ịgbalite usoro ịgba ọsọ iji kwalite njikere ya iji merie ihe ịma aka nke ugbu a na ọdịnihu. Ya mere, echiche niile nke njikwa nsogbu nwere, ọ ga-aga n'ihu na-achọ nkwado, mkpebi siri ike nke mmekorita na mmekọrịta bara uru gosipụtara, amụma nke data na-ebute, echiche ọhụrụ na mmegharị, iwulite ikike mmadụ, ime ihe ike. ”